Sheekooyinka ganacsiga. Geopois.com
Daabacaddan 6-aad ee Twingeo Magazine waxaan ku fureynaa qayb u heellan hal-abuurnimada ganacsiga, markan waxay ahayd markiisa Javier Gabás Jiménez, oo Geofumadas uu la xiriiray munaasabado kale adeegyada iyo fursadaha loo fidiyay bulshada GEO. Thanks to taageerada iyo wadista bulshada GEO, waxaan awoodnay inaan diyaarino qorshaheena ...
Cartografia, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS
CAST - Waa barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay falanqaynta dambiyada
Soo ogaanshaha qaababka duruufaha ee dhacdooyinka fal-dambiyeedyada iyo isbeddellada ayaa ah arrin xiiso u leh Gobol kasta ama dowlad hoose. CAST waa magaca softiweer bilaash ah, xarfaha bilowga ah ee Falanqaynta Dembiyada ee Booska - Waqtiga, kaas oo la bilaabay 2013 oo ah xalka u furan ilaha falanqaynta falgalka, oo leh qaabab ...
Maareeyaha joogo da'ayeen for Bricscad
Iyada oo farxad weyn oo aan ku aragno oo uu soo bandhigay version ugu horeysay ee Manager astaanta for Bricscad, si dadka isticmaala hadda ka dhigi kartaa isticmaalka joogtada GIS on software ah CAD qiime jaban.
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, aragti ugu horeysay
ArcGIS Plugin ee loogu talagalay AutoCAD ESRI ayaa sii daayay qalab lagu sawirayo xogta ArcGIS ee ka socota AutoCAD, kaas oo u sudhan sidii tab cusub oo Ribbon ah mana aha muhiim in la haysto liisanka ArcGIS ama barnaamijka lagu rakibay. Waxay la shaqeysaa noocyada AutoCAD 2010 ilaa AutoCAD 2012, waxba kama aysan sheegin AutoCAD ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub
2 Isbeddellada aagga geospatial in aan la yasin karaa
Sannadku wuxuu ku bilaabmay xoog weyn shirkadaha u heellan aagga tababarka, waxaan uga faa'iideysaneynaa qodobkan si aan u dhiirrigelino qaar ka mid ah hal-abuurnimada ka jirta arrintan, oo markii dambe waxaan siineynaa sii socoshada wax soo saar, kaas oo khadka aan ka hadlaynay tan iyo markii sanadkii la soo dhaafay; taas oo aan u aragno inay tahay mid gaar ah ...
Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, tabo cusub
Maxaa Cusub ee MobileMapper Field iyo MobileMapper Office
Bishii Juun 2011, noocyada cusub ee softiweerka loo isticmaalo qalabka Ashtech ayaa la sii daayay, markaa marka la iibsanayo qalab cusub, noocyadan hubaal lama imaan doono. Waxaan uga faa'iideysanayaa qodobkaan si aan u muujiyo halka laga soo dejisan karo, iyo sidoo kale astaamaha cusub ee cusbooneysiintan: Xaaladda ...
GPS / Qalabka, tabo cusub
Zonum Solutions waa goob bixisa qalab uu soo saaray arday ka tirsan Jaamacadda Arizona, oo waqtigiisa firaaqada u heellan mawduucyada koodhadhka la xiriira aaladaha CAD, khariidaynta iyo injineernimada, gaar ahaan faylasha kml. Waxaa laga yaabaa in waxa caan ka ahaa ay ahayd in lagu bixiyo bilaash, iyo in kastoo ...
Khilaaf Version Office MobileMapper iyo MobileMapper Office 6
Qoraalkii ugu dambeeyay waxaan kahadleynay xogta laga soo dejiyay kombiyuutarada Magellan, halkaasna waxaa ka imanaya baahida loo qabo in la cadeeyo noocyada kala duwan ee Xafiiska MobileMapper. Xafiiska MobileMapper 6 Kani waa qayb ka mid ah softiweerrada yimaada markii aad iibsaneyso MobileMapper 6, waa software cusub, oo si dhib yar u maraya nooca 1.01.01 ...
Geospatial - GIS, GPS / Qalabka